दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर कहिले ? SULSULE:A Truly Nepali News Portal
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर कहिले ?
२०७५ चैत २९ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले १ वर्ष कटाइसकेको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले त्यसपछिका दिनमा प्रायः देशका विभिन्न स्थानमा भाषणका क्रममा सरकारले २ वर्षभित्रै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने वचन दिँदै हिँडेका थिए । राष्ट्रसंघको सन् २०३० सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्नुपर्ने भएका कारण दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर दुई वर्षभित्रै हासिल गर्ने सपना ओलीले देखे पनि अब त्यो सपना अधूरै रहने निश्चितप्रायः भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको दुई वर्षभित्रको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकको हुने कुरालाई विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले नकारेका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक गरेका नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनले यही पुष्टि गर्छ ।
त्यसो त २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा सरकार आफैँले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत मात्र पुग्ने अनुमान गरेको थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसअघि नेपालले ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भए पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेको दुई वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुन गत वर्षभन्दा झण्डै दोब्बर आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको प्रगति निराशाजनक रहँदा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिँदैन । यी आयोजना पूरा भएपछि भने दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मु्द्रा कोषका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पुग्नेछ । आईएमएफको गिर्ट अल्मेकिन्डर्सको नेतृत्वको टोलीले गत मंसिर २७ गते ११ दिन लगाएर नेपालमै आई यस्तो अनुमान प्रक्षेपणसहितको प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले त आईएमएफले अनुमान गरेभन्दा पनि तल रहने गरी आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान निकालेको छ । केही दिनअघि मात्रै नेपालको आर्थिक विकाससम्बन्धी रिपोर्टमा उसले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आव (सन् २०१९) मा ६.२ प्रतिशत रहने जनाएको छ । एडीबीकै अनुमानमा आगामी आवको आर्थिक वृद्धिदर समेत ६.३ प्रतिशत मात्रै रहनेछ ।
एडीबीको पछिल्लो प्रतिवेदन दुई वर्षमै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ओली सरकारको भनाइलाई माथ दिने गरी आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको अनुमान प्रक्षेपण प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक भाषणमा बोलेजसरी हचुवामा आएको होइन, यो त समग्र नेपालको आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकनपछि मात्रै आएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि स्वीकारेको तथ्य के हो भने आन्तरिक मागको बलियो स्थिति रहेकाले आर्थिक वृद्धिदर स्थिरतातर्फ केन्द्रित चाहिँ अवश्य भएको छ । उनीहरुले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र प्रदेश तथा स्थानीय निकायसम्म ठूलो मात्रामा गरिएको बजेट विनियोजनको कारण आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक रहनसक्ने बताएका हुन् ।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालको हरेक क्षेत्रमा क्रान्ति नै हुनुपर्छ अर्थात् कृषि, उद्योग, यातायात, पर्यटन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा विकासे चहलपहल तीव्रतर हुनुपर्छ । तर त्यस्तो अवस्था दुई वर्षभित्र सम्भव हुने देखिँदैन भन्ने त सरकारले नै स्वीकारिसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवका २२ आयोजनाहरुमध्ये पाँच वर्षभित्र १७ आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको अभिव्यक्तिलाई यसको आधार मान्न सकिन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले त दुई अंकको निरन्तर आर्थिक वृद्धि गर्न ५ वर्षमा ९७ खर्ब ७७ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने बताएको छ । तर सरकारले भने एउटा आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न तोकेको रकम समेत खर्चिन सकेको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशमा १५औँ पञ्चवर्षीय योजना सुरु हुँदै छ । पाँच वर्षे योजना भए पनि लक्ष्य भने दीर्घकालीन राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन करिब तीन महिना बाँकी रहँदा ४५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले चैत सकिन लाग्दा ५ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ भने अझै ७ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च नै हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको सरकारले हालसम्म १ खर्ब ३ अर्ब अर्थात् ३३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
यही तरिकाले अनुमान नै लगाउने हो भने पनि सरकारको २ अंकको आर्थिक वृद्धिदर मृगतृष्णशिवाय केही होइन । यद्यपि यो सपना साकार पार्नै नसकिने भन्ने पनि होइन तर त्यसको लक्षण मात्र पनि सरकारले देखाउनुपर्ने हो, सकेको छैन । सबै प्रदेशमा खोल्ने भनेको विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाले गति लिएको छैन । चीनसँग पारवहन सम्झौता भएको छ तर त्यसको उपयोग हुनसकेको छैन । रेल र पानीजहाज कार्यालयहरु स्थापना भएका छन् तर यी सबै देखाउनकै लागि भएका छन् । जति यो सरकारले बोलेको छ, त्यति त के, त्यसतर्फ लम्किरहेको आभाससम्म नमिल्दा जनता समेत निराश हुनुपर्ने अवस्था छ । कुरै गरेर हुने भए त आजभन्दा १० वर्षअघि नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाललाई १० वर्षमा कायापलट गरेर स्विट्जरल्यान्ड बनाइदिने बताएका थिए । भनेर हुँदो रहेनछ भन्ने त उनले पनि महसुस गरेको हुनुपर्छ ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा रटान गरेको सरकारले विकास निर्माणका धेरै ठूला ठूला सपनाहरु देखेर जनतालाई समेत आश्वासन बाँडेको छ तर यसको काम गराइ त्योसँग मेल नखाँदा भने निराशा छाएको छ । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित घोषणा गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष आउन अब केही समय मात्रै बाँकी छ तर सरकारको तयारी हेर्दा त्यो लक्ष्य पनि धरापमा पर्ने देखिन्छ । त्यसको तयारीमा खटिनुपर्ने मूल आयोजक समितिका संयोजक समेत रहेका पर्यटनमन्त्री नै छैनन् । एउटा कार्यकारी जस्तो पद खाली राख्दा त्यसको असर कति पर्छ भन्ने त अहिले पर्यटन भ्रमण वर्ष २०२० का लागि तोकिएका तल्ला तहमा भइरहेका ढिलाइसुस्तीले पनि देखाउँछ । भ्रमण वर्ष मनाउन कार्यविधि बनाए पनि तयारीका लागि गठित उपसमितिलाई पर्यटन बोर्डको एउटा कोठामा थन्क्याइएको छ ।
गर्ने भनेका काम र योजना सम्पन्न गर्न कटिबद्ध हुनुपर्ने सरकार अलमलिनु राम्रो होइन । भूकम्प गएको ३ वर्ष बितिसक्दा सरकारले थालेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियान सम्पन्न हुनसकेको छैन । कतिपय लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएर पनि पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने कतिपयबाट दिएको रकम पनि सरकार आफैँले असुलेको छ । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी थिमितिर भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने सरकारी ढुलमुले प्रवृत्तिले कसरी देशले काँचुली फेर्ला ? कसरी दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हात पार्ला ? एउटा सियो पनि उत्पादन नहुने देशमा बाहिरबाट कुनै कार निर्माण गर्छु जग्गा उपलब्ध गराइदेऊ भनेर आउँदा यहाँका उद्योगीहरु हुँदैन है भनेर विरोध गर्न थाल्छन्, प्रधानमन्त्रीलाई भेटिहाल्छन् । भर्खरै दक्षिण कोरियाली कम्पनी मेट्रोक्सले लगानी गर्न आउँछु भन्दा उद्योगी व्यवसायीले गरेको विरोध यसकै उदाहरण हो । तसर्थ सरकार बोल्ने होइन काम गर्ने स्वभावमा हिँड्नुपर्छ । सपना देख्न पाइन्छ तर पूरा हुने सपना देख्नुपर्छ । अनिमात्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुनसक्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)